Search & Share: Opinion
နေ့ တိုင်းဖတ်သင့် သောမှတ်သားစရာအတိုအထွာ
(၁) "ငါ မဆိုးဘူး" လို့ ကိုယ့်ကို တနေ့တခါ ပြောပေးပါ။
(၂) ဒေါသထွက်တယ် ဆိုတာ တခြားလူရဲ့ အမှားကို ယူပြီး ကိုယ့်ကို အပြစ်
(၄) မနက်ဖြန်အတွက် မျှော်လင့်ချက်ဟာ ဒီနေ့ရဲ့ နာကျင် ၀မ်းနည်းမှုကို မေ့
(၅) အိပ်မက်၊ စိတ်ကူးနဲ့ အတွေးတွေ မရှိတဲ့ ဘ၀ဟာ အကိုင်း၊ အခက်၊ အ
ရွက်မရှိတဲ့ သစ်ခြောက်ပင်နဲ့ တူတယ်။
(၆) နေကပဲ အလင်းဖြာနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့လဲ အလင်း ဖြာနိုင်ပါ
(၇) ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ တကမ္ဘာလုံးကို ပိုင်ဆိုင် စေနိုင်သလို အမုန်းရန်ငြိုးနဲ့
(၈) လူ့တန်ဖိုး ဆိုတာ ဖြားယောင်း မြူဆွယ်ခံရတဲ့ တခဏမှာ အဆုံးအဖြတ်
တယ်။ တခါခါ မနာလို ၀န်တိုမှုဆိုတဲ့ သဲလေး တပွင့်တောင် ၀င်မဆန့်နိုင်
(၁၁) ဘယ်အချိန်မှာ စတင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးတာက စတင်ပြီး
နောက် နောင်တ မရဖို့ပါပဲ။
(၁၃) ပျော်ရွှင်ခြင်း ဆိုတာကို မျှဝေတတ်ရမယ်။ ဒါမှ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ဆင့်
(၁၅) လူတွေဟာ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရာကို မေ့ပြီး မရသေးတဲ့ အရာကိုမှ
(၁၆) အရာရာကို အောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အောင်နိုင်တာနဲ့ နိုင်းရင်
(၁၇) အရာရာကို ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးရှုံးတဲ့ အရှုံးနဲ့
(၂၀) ပျံသန်းနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ပျံသန်းခြင်းကို လက်မလွှတ်ပါနဲ့။
အိပ်မက် မက်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ အိပ်မက်ကို လက်မလွှတ်ပါနဲ့။
အချစ်ကို ခံစားမိတဲ့ အချိန်မှာ အချစ်ကို လက်မလွှတ်ပါနဲ့။
ဘ၀ဆိုတာ တိုတောင်းလွန်းပါတယ်။ ဒီနေ့ လက်လွှတ်လိုက်ရင် မနက်ဖြန် ပြန်
(၂၁) လောကမှာ အပင်ပန်းဆုံးအရာဟာ မရေမရာနဲ့ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနေခြင်း
(၂၂) လူ့ဘ၀ရဲ့ အကြီးမားဆုံး အမှားဟာ "အမှားကိုများ လုပ်လိုက်မိပြီလား" လို့
အမြဲ စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ စိတ်ပါပဲ။
(၂၄) လုံးဝ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးကို သင်လိုချင်ရင် ဒီတသက် သင် သူငယ်
(၂၅) အမုန်းနောင်တ နည်းနည်းနဲ့ အတိတ်ကို ထားခဲ့ပါ။
ဖြုန်းတီးမှု နည်းနည်းနဲ့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ နေထိုင်ပါ။
(၂၆) ကိုယ့်ကို လူတုံး၊ လူအလို့ သဘောထားပြီး မသိတာရှိရင် မေးပါ။ ဒါမှ သင်
များများတတ်မယ်။ (ပညာရှာပမာ သူဖုန်းစား)
(၂၈) အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာကို ကြောက်ပြီး မလုပ်ခဲ့ရင် အောင်မြင်မှုဆိုတာ ဘယ်
တော့မှ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
(၂၉) သတ္တိရှိတယ်ဆိုတိုင်း ကြောက်ရွံ့ခြင်း မရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြောက်ရွံ့ခြင်း
ကို ရင်ဆိုင်ရဲမှ၊ ဖြေရှင်းရဲမှ သတ္တိရှိတာပါ။
၂. သီချင်းဆိုပါ။ အချို့သူများဟာ စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာ စိတ်ထွက်ပေါက်အတွက် သီချင်တွေ အော်ဆိုတတ်ကြပါတယ်.. ဒါဟာ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. မယုံရင် သင်ကိုယ်တိုင် စမ်းကြည့်ပါ။ ဒေါသဖြစ်နေလျှင်ဖြစ်စေ ၊ စိတ်ညစ်နေလျှင်ဖြစ်စေ သီချင်းတွေ တစ်ပုဒ်ပြီး တစ်ပုဒ် အော်ဆိုလိုက်ပါ။ အိမ်မှာ ကာရာအိုကေစက်ရှိလျှင် စက်ဖြင့် ဆိုပါ။ အကယ်၍ မရှိလျှင် ဆိုင်၊ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာဆို၊ ဒါမှ အဆင်မပြေရင် ရေချိုးခန်းထဲမှာဆို၊ ဒါမှ အဆင်မပြေလျှင်တော့ စဉ့်အိုးတစ်လုံးထဲ ခေါင်းစိုက်ပြီးသာ အော်ဆိုပါ. မကြာခင်မှာ သင့် စိတ်ထဲမှာ ခံစားနေတဲ့ ဖိအားတွေ လျော့ပါးလာတာကို သိသိသာသာ ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်. (ဒီနည်းကတော့ ကျွန်မအတွက် လက်တွေ့မှန်ကန်တဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်..)
၄. ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု များများလုပ်ပါ။ လှုပ်ရှားတက်ကြွနေသူများဟာ ပျော်ရွှင်တတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ လွယ်ကူပါတယ်.. သင့်ကို တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ရှားစေမဲ့ အားကစားလေ့ကျင့်ခန်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ကခုန်ခြင်း၊ အစုအဖွဲ့များဖြင့် လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပါဝင်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် မကြာခဏ တွေ့ဆုံ သွားလာခြင်း၊ ချက်ပြုတ်စားသောက်ခြင်း တို့ဟာလည်း သင့်အား အထီးကျန်သူတစ်ယောက် မဖြစ်စေလဲ လောကကြီးတွင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်တတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်..
၅. တီထွင်ဖန်တီးပါ။ မိမိရဲ့ ဖန်တီးမှု၊ အားထုတ်မှုလေးတွေဟာလည်း စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကို ပေးနိုင်ပါတယ်.. တစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လို့ အောင်မြင်သွားတဲ့အခါ ရလာတဲ့ ပီတိဟာ သင့်အတွက် ခွန်အားတွေဖြစ်ပါတယ်.. တီထွင်ဖန်တီးပါ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ လက်လှမ်းမမှီ၊ ကိုယ်နဲ့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို ဖန်တီးခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲ မိမိ ၀ါသနာကို အရင်းခံပြီး အသစ်အဆန်းလေးတွေ ဖန်တီးတာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်.. ဥပမာ- ပန်းချီ ၀ါသနာပါသူက ခါတိုင်းဆွဲပုံနဲ့ မတူတဲ့ ပန်းချီကားအသစ်လေးတွေ ဆွဲတာ၊ ပန်းပု ဒီဇိုင်းအသစ်လေးတွေ ထုတာ၊ မရောက်ဖူးသေးတဲ့ နေရာတွေကို ခရီးထွက်တာ၊ ကကွက်ဆန်းတွေ ကတာ၊ ဟင်းချက်ဝါသနာပါသူများကလည်း မချက်ဖူးသေးတဲ့ ဟင်းအမယ်သစ်လေးတွေ စမ်းချက်ကြည့်တာ၊ အပင်လေးတွေ အသစ်စိုက်ပျိုးတာ၊ အိမ်ကို လိုက်ကာ ခန်းဆီးအသစ်လဲတာ၊ ပန်းအိုးလေးတွေ အသစ်ဝယ်ပြီး နေရာချတာ၊ စသဖြင့် ခါတိုင်းနဲ့ မတူတာလေးတွေကို လုပ်ကြည့်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်.. (မှတ်ချက်- ရည်းစားအသစ်ပြောင်းတာ၊ အိမ်ထောင်အသစ်ရှာတာ အဲဒါတွေ မပါဘူးနော် :) ) စိတ်ကူး အသစ်အဆန်းလေးနဲ့ တီထွင်ဖန်တီးပြီး လုပ်ကြည့်ခြင်းဟာလည်း စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖွေခြင်း တစ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
၆. တခါတရံ ကလေးဆန်းပါ။ မိမိငယ်စဉ်က ပြုမူခဲ့တဲ့ အပြုအမူကလေးများကို ပြန်လည်ပြုမူခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ငယ်မူငယ်သွေး ပြန်ပေါ်လာစေပြီး လန်းဆန်း တက်ကြွသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာစေပါတယ်.. ငယ်ငယ်ကလို ခုန်ပျံကျော်လွှားကစားခြင်း၊ လမ်းမပေါ်က ဘီယာဘူးခွံ၊ ဖျော်ရည်ဘူးခွံများကို အားပါးတရ ဆော့ကစား ကန်ကျောက်ခြင်း၊ ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းများနှင့် ပြန်လည်တွေ့ဆုံပြီး ငယ်ဘ၀အကြောင်းများ ပြန်ပြောင်းသတိတရ ပြောကြခြင်း စတာတွေဟာလည်း မိမိကို ပျော်ရွှင် လန်းဆန်းစေနိုင်ပါတယ်။
၇. အခြားသူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကလေးငယ်များ၊ တိရိစ္ဆာန်များကို ချစ်ခင်စာနာပါ၊ ကြင်နာငဲ့ညှာပါ။ နွေးထွေးယုယစွာ နေထိုင်ပါ။ စကားကို ချိုသာစွာပြောဆိုခြင်း၊ သူတပါးအတွက် လိုအပ်နေသော်လည်း မိမိအတွက် အပန်းမကြီးသော အကူအညီများကို ပေးခြင်း၊ သူတပါး အခက်အခဲကို စာနာနားလည်းခြင်း၊ စသော စိတ်နှလုံး သိမ်မွေ့နူးညံ့စေသည့် အဖြစ်အပျက်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတို့သည်လည်း မိမိစိတ်ကို ပျော်ရွှင်စေသော အရာများဖြစ်ပါတယ်။
၈.ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သောနေရာ၊ အချိန်များတွင် မျက်စိမှိတ်၍ ငြိမ်သက်စွာ အနားယူခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်း၊ ယောဂ ကျင့်ခြင်း စသည်တို့သည် စိတ်ခွန်အားကို တိုးပွားလာစေပြီး ၊ ပြန်လည် လန်းဆန်းလာစေသော နည်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်. သီချင်းအေးအေးများကို နားထောင်ခြင်း ၊ရေချိုးကန်တွင် အချိန်ယူ၍ ရေစိမ်ချိုးခြင်း၊ ဖယောင်းတိုင်မီးရောင်လို ခပ်မှိန်မှိန် မီးရောင်အောက်တွင် အနားယူခြင်း၊ စသည်တို့ကို တခါတရံ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်.
၉. ဘ၀ကြီးဟာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်ဖို့ ခက်ခဲပင်ပန်းလွန်းတယ်လို့ ပြောလာခဲ့ရင် အဲဒီစကားကို လစ်လျှူရှုလိုက်ပါ။မနက်ခင်းတိုင်း နိုးထလာချိန်မှာ မိုးရွာနေသည့်နေ့ ဖြစ်နေပါစေ.. မနက်ခင်းကို မြင်တွေ့ရပြီး ရှင်သန်ခွင့်ရတဲ့ တစ်နေ့အတွက် လောကကြီးကို ကျေးဇူးစကား ဆိုလိုက်ပါ။ မည်သည့်အခက်အခဲကိုမှ လွယ်လွယ်နှင့် လက်လျှော့ အရှုံးပေးလိုက်ဖို့ မစဉ်းစားပါနှင့်။
ကျွန်တော် ဘက်စ်ကား စီးဖူးပါတယ် အကြည်တော် !
အကြည်တော် ရေးထားတဲ့ ကျောက်သင်ပုန်းတွေမိုးထားတဲ့အိမ် ကို ဖတ်မိတော့ ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာ ပတ်ဆံမပေးပဲ ဘတ်စ်ကား ခိုးစီးတဲ့ အဖြစ်လေးတွေကို သတိရမိတယ် ။ ၅၀ တန်ခရီး ၁၀၀ တန်ခရီးတွေကို ဘတ်စ်ကားစီးပြီး သွားခဲ့ဖူးပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ ၁၀၀ ပေးပြီးစီးရမှာကို မပေးချင်တာနဲ့ ၅၀ ပေးပြီး မှတ်တိုင် လိမ်ပြောခဲ့ပါတယ် ။ လူးတွေက အများကြီးပဲဟာကိုး စပါယ်ရာ မသိပါဘူးဆိုပြီးတော့ လူလည်ကျတာလေ ။ ရန်ကုန်ရောက်ခါစကတော့ ကားမှားစီးတာ ခဏ ခဏ ပဲ ။ စပါယ်ရာငေါက်တာ ခံရပေါင်းလည်း မနဲတော့ဘူး ။
ရန်ကုန်မှာ အနေကြာလာတော့လဲ ဘက်စ်ကားစီးတာ ကျွမ်းသွားပါပြီ ။ မသွားတတ်လဲ ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာ မေးတတ်ပါတယ် ။ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်သွားသွား မြေပုံမလိုပါဘူး လမ်းညွှန်ကြည့်စရာ မလိုဘူး။ မြန်မာပဲ ပါးစပ် ပါတယ် မဟုတ်လား ။ တစ်ခါတုန်းကဆိုရင် ပတ်ဆံ မပါခဲ့လို့ စပါယ်ရာကို ပြောပြီး အလကား စီးခဲ့ဖူးပါတယ် ။ အဲဒိတုန်းက ပိုက်ဆံ ဘာဖြစ်လို့မပါခဲ့တာလဲဆိုတာ မမှတ်မိတော့ပါဘူး ။ ည ၁၁ နာရီလောက် ရောက်နေပြီ ကျွန်တော် နဲ့ နောက်တစ်ယောက်
ပါတယ် တာမွေကနေ စိန်ပေါလ် အထိသွားချင်တာ ညဘက် အောက်ဆိုဒ်ကား ဒိုင်နာ ဆိုတော့ တစ်ယောက် ၂၀၀ ၊ နှစ်ယောက်ဆိုတော့ ၄၀၀ လောက်ကျမယ်ထင်တယ် ။ ဒီလိုပဲ စပါယ်ရာကို ပိုက်ဆံမပါဘူး လိုက်လို့ရမလား ကူညီပါလို့ ပြောတော့ စပါယ်ရာက ရတယ် ရတယ် တက် တက် ဆိုပြီး ကျွန်တော် အလကားစီးခဲ့တာပါ ။ အဲဒိ စပါယ်ရာအစ်ကိုကြီး ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ ဗျာ ။
ဘက်စ်ကားစီးရင် အဆင်မပြေတာတစ်ခုက အကြွေရှာရတာပဲ ။ အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် ပိုက်ဆံ အစုပ်တွေပဲ တွေ့ရလိမ့်မယ် ။ ၂၀၀၃ - ၀၄ လောက်တုန်းကဆိုရင် နေပူပူမှာ လူကျပ်ညှပ်နေတဲ့ ဘက်စ်ကားကို စီးပါတယ်။ ကောင်းမလေးတွေ အနားကိုတိုးပြီး စီးပါတယ် ။ ဒိုင်နာကား နဲ့ ဗိုက်ပူကားကို ကျွန်တော် အမုန်းဆုံးပါ ။ ရန်ကုန်မှာ ဘက်စ်ကားကို ၁၀ နှစ်လောက် ကျွန်တော်စီးဖူးတယ် ။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဘက်စ်ကားစီးရမှာ ကြောက်တဲ့သူတွေရှိပါတယ် ။ သူတို့က တက္ကစီ စီးပါတယ် ။ ကျွန်တော့်မှာ တက္ကစီ စီးဖို့ ပိုက်ဆံ မရှိပါ ။ ပိုက်ဆံကို နမျောတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ပိုက် ပိုက် ရှိလည်း စီးဖြစ်မယ် မထင် ။
ကျွန်တော်စီးဖြစ်တဲ့ ဘက်စ်ကားတွေထဲမှာ ဓါတ်မီးတိုင်ကို ၀င်တိုက်တဲ့ကား ၊ ပလက်ဖေါင်းပေါ်တက်သွားတဲ့ကား ၊ ကားခေါင်းကြီး ကြွေမွသွားတဲ့ကား ၊ ကားဘိန်းတွေ မိုးပေါ်ထောင်နေတဲ့ကား တွေနဲ့တော့ မကြုံခဲ့ပါဘူး ။ ကျွန်တော်က အက်ဆီးဒန့် ဖြစ်ပြီး ဂန့်မယ့်သူတွေ စာရင်းထဲမှာ မပါလို့ ထင်ပါရဲ့  ။ ကားဘိန်းပေါက်လို့ ကားပြောင်းစီးတဲ့ အဖြစ်မျိုးတော့ ကြုံဖူးပါတယ် ။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ အဲယားကွန်းပါ ပါရမီ ၊ အထူးကား တွေ ဘယ်သွားသွား ၂၀၀ ၊ ၃၀၀ ထိုင်ခုန်ရတတ်တယ် ဆိုတော့ မြို့နေလူထုက သဘောကျပါတယ် ။ လူဆိုတာ အကောင်းဆုံးတွေကို ရွေးကြိုက်တဲ့ အမျိုးပါ ။ ၅၀ ၁၀၀ တန်ခရီးကို ၂၀၀ ၃၀၀ ပေးစီးရဲတဲ့ သတ္တိရှိလာပါတယ် ။
အ၀တ်အစား လှလှပပ ၀တ်ပြီး ဘက်စ်ကားတော့မစီးချင်ပါဘူး ရှက်လို့ပါ ။ ဒါပေမယ့် အမှန်အတိုင်းပြောကြေးဆိုရင်တော့ ဘက်စ်ကား စီးရတာ ကျွန်တော် မရှက်ပါဘူး ။ ဘာဖြစ်လို့ မရှက်သလဲဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင်ကား မရှိလို့ပါ ။ နောက်တစ်ခုက ကားကို ကောင်းကောင်း မမောင်းတတ်ပါဘူး ။ ရန်ကုန်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ဆုံဖြစ်တယ် ။ ဖိုးသားတဲ့ သူ့မှာ ကားရှိတယ် ။ သူ့ကားနဲ့ အတူ လျှောက်လည်တယ် ပျော်စရာ ကောင်းလိုက်တာ အ၇မ်းပဲ ။
မပြည့်ဆုံတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကားအကောင်းစားတွေကိုစီးနေတဲ့ လူတွေကို ကြည့်လို့မရပါဘူး ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ သူတွေကိုလည်း ကြည့်လို့ မရပါဘူး ဒါဟာ ထုံးစံ တစ်ခုလို ဖြစ်နေပြီ ။ ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့စာအုပ်ထဲကလို "မင်းဟာမင်း ၊ ငါဟာငါ ပဲ" ဆိုတဲ့ စကားကို နာနာ ရွတ်ကာ ဖြေသိမ့်တတ်သူပါ ။ ကမ္ဘာမှာ အကောင်းစားအရာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်သူ ၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့သူတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီး ထိပ်ဆုံးမှာ ရောက်ချင်နေသူ ၊ ဟုတ်ကဲ့ အဲဒိလောက်တောင် ဖြစ်ချင်တာတွေ များနေတော့ ဘာမှဖြစ်မလာတာ မဆန်းသလိုပဲ ။ လူသားတစ်ယောက်နေနဲ့ မလုပ်နိုင်တာတွေ အများကြီးရှိတယ် ဆိုတာ သိလာပါတယ် ။ မင်းလုပ်ရင်ဖြစ်တာပဲ ငါလဲလုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ နေရာတိုင်းမှာ မမှန်ပါဘူး ။ လူတွေရဲ့ ကံ ၊ ပါရမီ ၊ စန်း တွေဟာ မတူညီကြပါဘူး ။ အသက်ရှင်တဲ့ အချိန်ဟာ တိုပါတယ် ။
အောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့ ပေးဆပ်ရမယ့် အချိန်ဟာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကြာမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ။
အခု ကျွန်တော် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ နေပါတယ် ။ ၀ါသနာပါတာကို လုပ်ပါတယ် ။ အောင်မြင်မှု ချမ်းသာမှု တွေကို မေ့ထားပါတယ် ။ အနာဂါတ် အကြောင်းလဲ မသိချင်ပါဘူး ။ ကမ္ဘာကြီး အကြောင်းလဲ မသိချင်တော့ဘူး ။
Nitikiti ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ကမ္ဘာက မသိပါဘူး ။ ငါလာတယ် ငါမြင်ခဲ့တယ် ။ မင်းသာ ငါ့ကို သိအောင် ကြိုးစားပါ ။
မိန်းမတွေကို ဖနှောက်နဲ့ ပေါက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
မင်းခိုက်စိုးစန်ရဲ့ အလိုအရ ပြောရမယ်ဆိုရင် မိန်းမဆိုတာမျိုးဟာ ဂျာနယ်နဲ့ တူတဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ် ။
တစ်အချက်က ... ဂျာနယ်တွေဟာ ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စသေးသေးလေးတွေကို လူစိတ်ဝင်စာလာအောင် ပုံကြီးချဲ့တတ်သလို မိန်းမတွေဟာလည်း အဲဒီလိုပဲ ။
နှစ်အချက်က ... ဂျာနယ်ထဲမှာ ရေးသမျှ ပြောသမျှတိုင်းကို အမှန်လို့ ထင်ပြီး ယုံလို့မဖြစ်ဘူး ။ ဒီအတိုင်းပဲ မိန်းမတစ်ယောက် ပြောသမျှကိုလည်း အမှန်တွေချည်းပဲလို့ မထင်လေနဲ့ ။
နံပါတ်သုံးအချက်က ... မိန်းမတွေကော ဂျာနယ်တွေကော နှစ်ခုစလုံးဟာ ရောင်းကောင်းအောင်ဆိုပြီး မျက်နှာဖုံးလှလှနဲ့ ဆွဲဆောင်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်ဗျာ ။
နံပါတယ်လေးအချက်က ... သွားရင်းလာရင်း အပျင်းပြေ အချိန်ဖြုန်းမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒိနှစ်မျိုးစလုံးဟာ တော်တော် အသုံးဝင်တယ် သိတယ် မဟုတ်လား
နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ... မိန်းမတွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်လို့ ပြောနေစေကာမူ
ဂျာနယ်တွေလို ဖတ်ချင်လာတဲ့ အခါ သူများဆီက ခဏခဏငှားဖတ်နေလို့တော့ မဖြစ်ဘူး ။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ထားတဲ့ ဂျာနယ်တစ်စောင်စီတော့ ရှိသင့်တယ် လေ ဟုတ် ။
♥♥ မွေးရက်၊မွေးဂဏန်းနှင့်တားရော့သင်္ကေတများ ♥♥
နှစ်စဉ်မည်သည့်လတွင်မဆို(၁)ရက်၊ (၁၀)ရက်၊ (၁၉)ရက်၊
(၂၈)ရက်များတွင်မွေးဖွား သူများသည် မွေးဂဏန်း(၁)သမားများဖြစ်သည်။
ပဉ္စလက်တစ်ခိုးရှင်သင်္ကေတ ဖြစ်သည်။ အနုပညာဦးဆောင်မှုပါရမီရှိသည်။ အသစ်
ဖန်တီးတတ်သည်။ ထက်မြက်သူဖြစ်သည်။ ဘဝ တွင်သူတစ်ပါးကိစ္စများကို
ကူညီရန်အမြဲကြုံ တတ်သည်။ ဗဟုသုတများကိုပြင်းထန်စွာရှာဖွေ တတ်ကြသည်။
ကို ရတတ် ရောက်တတ်သည်။
ခေါင်းမာသူဖြစ်တတ်သည်။ သူတကာထက်ပိုပြီး မာနကြီးတတ်သည်။ ဇွဲကောင်းတတ်သည်။
ဒေါသကြီးတတ်သည်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်တတ်သည်။ မျက်စိအား နည်းတတ်သည်။
သူတစ်ပါးအတွက်သာ အမြဲ ဖြည့်ဆည်းနေရသူဖြစ်တတ်သည်။ ကိုယ်တိုင်ကမူ
အမြဲလိုအထီးကျန်နေတတ်သည်။ ကျန်မာရေးတွင် နှလုံးသွေးအားနည်းတတ်သည်။
ဘဝသက်တာ တစ်လျှောက်တွင်ကံကောင်းရွှင် နေစေရန်နို့နှစ်ရောင်၊ အဝါရောင်၊
ရွှေအိုရောင်များ အမြဲဆောင်ပါ။ ဘဝတွင်အမြဲဆောင်ထားသင့်သည့် ကျောက်မျက်
နှစ်စဉ်မည်သည့်လတွင်မဆို (၂)ရက်၊ (၁၁)ရက်၊ (၂၀)ရက်၊ (၂၉)ရက်တို့တွင်
မွေးဖွား သူများသည် မွေးဂဏန်း(၂)သမားများ ဖြစ်ကြ သည်။ တားရော့သင်္ကေတမှာ
မယ်တော်ကြီး သင်္ကေတ ဖြစ်သည်။ နေသရဖူ လဝတ်ရုံနှင့်
သူတော်စင်မယ်တော်ကြီးတစ်ပါး၏ သင်္ကေတ ဖြစ်သည်။ မွေဂဏန်း(၂)သမားတို့သည် သနား
ညှာတာတတ်သည်။ သို့သော်တော်ရုံနှင့် လိုက်လျော မှုမပြုတတ်ပေ။
နူးညံ့အေးချမ်းဖြူစင်သူတွေဖြစ် သည်။ စိတ်ကူးÓဏ်ရင့်သန်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်
ကိုနှိမ့်ချတတ်ကြသည်။ မှတ်Óဏ်ကောင်းခြင်း နှင့်အတူ
ဆန်းသစ်သောအတွေးအခေါ်လည်း ရှိကြသည်။ သို့သော်ရှေးဆန်သည့်
လမ်းရိုးနှင့်လမ်း သစ်ကိုအမြဲဒွိဟဖြစ်နေတတ်ကြသည်။ ဘဝတွင် ရွေးရခက်သည့်
အခွင့်အရေးနှစ်ခုအမြဲကြုံရ တတ်သည်။ ကိစ္စတစ်ခုမပြီးမီနောက်တစ်ခု ပေါ်နေ
တတ်သည်။ သူတစ်ပါးအတွက်အကြံÓဏ်ကောင်း ပေးနိုင်ပြီး ကိုယ့်အတွက်အခက်အခဲ
အမြဲကြုံနေရ တတ်သည် နှလုံးသားထက် ဦးနှောက် ကိုပိုမို၍
ဦးစားပေးတတ်သူတွေဖြစ်သည်။ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုးတို့ကို
ဦးစားပေးနေရ၍ ကိုယ့်အခွင့် အရေးများ လက်လွတ်သွားခဲ့တတ်သည်။ ပတ်ဝန်း
ကျင်အတွက် ကိုယ့်ဆန္ဒမပါဘဲလုပ်ကိုင်နေရ တတ်သည်။ ဘဝတွင်အစာမကြေ၊ အဆုပ်ပွ၊
အာရုံကြောရောဂါများ ခံစားရတတ်သည်။ ဘဝတွင် လာဘ်ရွှင်ကံကောင်းနေစေရန်
အဖြူရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ ငွေရောင်များကိုများများ ဆောင်ပါ။ဝတ်ဆင်ပါ။
ဘဝသက်တာအတွက် ဆောင်သင့် သည့်ကျောက်မျက်ရတနာမှာ ပုလဲနှင့်ကျောက်စိမ်း
ဧကရီဘုရင်မသင်္ကေတ ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ခြင်း၊ ထွန်းကားခြင်း၊
နိုးကြားခြင်း ၊စာနာခြင်း စည်းစနစ် ရှိခြင်းတို့၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။
စည်းကမ်းလိုက်နာတတ်ကြ သည်။ စည်းကမ်းတကျ လုပ်ကိုင်တတ်ကြသည်။ ဦးတည်ချက်
မြင့်မားတတ်ကြသည်။ ဦးတည်ချက် တိကျခိုင်မာတတ်ကြသည်။ စိတ်ဓါတ်မြင့်မား
သူများဖြစ်သည်။ Óဏ်ပညာကြီးသည်။ ခေါင်း ဆောင်ကောင်းဖြစ်တတ်သည်။ ဟန်ဆောင်
အရွယ်နှင့်မမျှသော တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရတတ်သည်။ သူတစ်ပါး အားကိုး
ယုံကြည်ခံရတတ်ကြသည်။သူတစ်ပါးကို ကူညီ တတ်ကြသည်။ ဆွေမျိုးများအပေါ် ပေးဆပ်
ရတတ်သည်။ အနစ်နာခံရတတ်သည်။ ကိုယ်ချင်း စာနာစိတ်လွန်ကဲ၍ပြဿနာ ကြုံရတတ်သည်။
ဘဝတွင်အထီးကျန်ဆန်တတ်သည်။ ခရီးဝေးများ သွားရတတ်သည်။ နာမည်ကောင်းကျန်၍
ဘဝနိဂုံးချုပ်ရတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အဆုပ်ပွခြင်း၊
အာရုံကြောအားနည်းခြင်း၊ အရေပြား ယားယံခြင်းများခံစားရတတ်၏။ ဘဝသက်တာ
တစ်လျှောက်တွင်ကံကောင်းလာဘ်ရွှင် နေစေရန် ခရမ်းရောင်၊ မရမ်းရောင်၊
အပြာရောင်ဆောင်ပါ။ ဘဝသက်တာအတွက်ဆောင်သင့်သည့် ကျောက် မျက်ရတနာမှာ
နှစ်စဉ်မည်သည့်လတွင်မဆို (၄)ရက်၊ (၁၃) ရက်၊ (၂၂) ရက်၊ (၃၁)
ရက်တို့တွင်မွေးဖွား သူများသည် ၄ ဂဏန်းသမားများဖြစ်ကြသည်။
ဖစ် သည်။ မွေဂဏန်း(၄)သမားတို့သည် ဘုဂလန့်
သမားများဖြစ်တတ်ကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ထားချက် ချပြီးသော်လည်း
သူတစ်ပါးဝင်စွက်ဖက်ပါက ဘာမျှ မလုပ်လိုကြပေ။
ပါးမတွေးသော ရှုထောင့်မှတွေးတတ်ကြ သည်။
သီးသန့်နေတတ်ကြသည်။ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးလွန်း၍ လူမုန်းခံရတတ်ကြသည်။
ဘဝတွင် ထိခိုက်နာကျင်စွာခံစားရတတ်သည်။ ကိစ္စတော် တော်များများတွင်
အခက်အခဲမရှိဘဲမအောင်မြင် တတ်ကြချေ။ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းနှင့် ကောင်းကျိုး
များခံစားရတတ်သည်။ ဘဝတွင်အကွေ့အပြောင်း များသည်။ ကျန်းမာရေးတွင်
ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ဆီး ရောဂါများခံစားရတတ်သည်။ ဘဝတွင် လာဘ်ရွှင်
ကံကောင်းနေစေရန် အညိုရောင်နှင့် အပြာနုရောင် ကိုများများဆောင်ပါ။
ဘဝသက်တာအတွက် ရွှေကို တက်သစ်စနေဝန်းပုံလက်စွပ်ကွင်း၍ ဝတ်ပါ။
နှစ်စဉ်မည်သည့်လတွင်မဆို (၅) ရက်၊ (၁၄) ရက်၊ (၂၃)
ရက်တို့တွင်မွေးဖွားသူများသည် (၅)ဂဏန်းသမားများဖြစ်ကြသည်။ တားရော့
သင်္ကေတမှာ သာသနာပိုင်ဆရာတော်ပုံသင်္ကေတ ဖြစ်သည်။ ၅ ဂဏန်းသမားများသည်
လုပ်ဆောင်တတ်ကြသည်။ မျှမျှတတဆောင်ရွက်တတ်ကြသည်။ ဖြတ်ထိုး
ဥာဏ်ကောင်းတတ်ကြသည်။ ကြားနေဝါဒရှိသူများ ဖြစ်တတ်ကြသည်။
လူတန်းစားပေါင်းစုံနှင့်အဆင် ပြေအောင်ဆက်ဆံတတ်သည်။ စည်းစနစ်ကျန
ထက်မြက်သော Óဏ်ကိုအလွဲသုံးစားမပြုသင့်ပါ။ တီထွင်ဆန်းသစ်
ခြင်းဖြင့်ဘဝအောင်မြင်တတ်ကြသည်။ အပြော ကောင်းသူများဖြစ်ကြသည်။
အနုပညာပါရမီရှိတတ် ကြသည်။ သူတစ်ပါးလက်လျှော့ထားသောကိစ္စ
တစ်ချိန် တည်း အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ြ
ကျန်းမာရေးတွင် ရင်ဘတ်အဆုပ်အအေးမိခြင်းနှင့် အစာအိမ်ရောဂါတို့
ခံစားရတတ်သည်။ ဘဝသက်တာအတွက်ဆောင် သင့်သည့် ကျောက်မျက်ရတနာမှာ
နှစ်စဉ်မည်သည့်လတွင်မဆို (၆) ရက်၊ (၁၅) ရက်၊ (၂၄)
ရက်တို့တွင်မွေးဖွားသူများသည် ၆ ဂဏန်းသမားများဖြစ်ကြသည်။ တားရော့
သင်္ကေတမှာ ]ချစ်သူများ}သင်္ကေတဖြစ်သည်။ အာဒမ်နှင့်ဧဝကို အချစ်နတ်ဘုရားက
ကောင်းချီး ပေးပုံသင်္ကေတ ဖြစ်သည်။ ၆ ဂဏန်းသမားများ သည်
မေတ္တာတရားကိုအခြေခံ၍ ဘဝကိုထူထောင် လိုသူများဖြစ်ကြသည်။
နှလုံးသားခံစားမှုကို ရှေ့တန်း တင်လိုသူများဖြစ်ကြသည်။
တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ရှိကြသည်။ အစွဲအလန်းကြီးသူများဖြစ်တတ်ကြ သည်။
အမျက်ကြီးသူများဖြစ်ကြသည်။ ဟန်ပန် အမူအရာကောင်းသူများဖြစ်ကြသည်။ အပြော
ဘဝအစတွင်ခက်ခဲပင်ပန်းရတတ် ကာအိမ် ထောင်ကျပြီးမှဟန်ကျပန်ကျ ဖြစ်တတ်ကြ
သည်။ဘဝအစတွင် တစ်စုံတစ်ရာကို ဆုံးရှုံးမှုကြုံတတ် ကြသည်။ အချုပ်အချယ်ခံရ
တတ်သည်။ နောက်ပိုင်း တွင်အောင်မြင်တတ်ကြ သည်။
ဘဝသက်တာကံကောင်းလာဘ်ရွှင်နေစေရန် အပြာရောင်၊ အနီ ရောင်များများဆောင်ပါ။
ကျန်းမာရေးတွင် လည်ချောင်းနှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါ၊ အဆုပ်ရောဂါ၊
အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခြင်းတို့ ခံစားရတတ်၍ ဂရုပြု သင့်သည်။ ဘဝသက်တာ
နှစ်စဉ်မည်သည့်လတွင်မဆို (၇) ရက်၊ (၁၆) ရက်၊ (၂၅)
ရက်တို့တွင်မွေးဖွားသူများသည် ၇ ဂဏန်းသမားများဖြစ်ကြသည်။ တားရော့သင်္ကေတမှာ
စစ်ရထားတစ်စီး၏ သင်္ကေတဖြစ် သည်။ စစ်နတ်ဘုရားစီးနင်းလိုက်ပါလာသည်
မနုသီဟအဖြူနှင့်အမည်းဆွဲလာသည့် စစ်ရထားပုံ သင်္ကေတဖြစ်သည်။
အကောင်းနှင့်အဆိုး၊ အလင်း နှင့်အမှောင်၊ အမှားနှင့်အမှန်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အရာ
များဒွန်တွဲ၍ ဘဝခရီးကြမ်းကိုဖြတ်သန်းရသည့် နိမိတ်ပြပုံဖြစ်သည်။ ၇
ဂဏန်းသမားများသည် အမြဲ အသင့်အနေအထားတွင်နေရတတ်သည်။ အငြိမ် မနေရဘဲ
လှုပ်ရှားနေရတတ်သည်။ သံယောဇဉ် ရှိသူများနှင့်ခွဲခွာပြီး ဘဝတိုက်ပွဲဝင်ကာ
ကသည်။ ပင်ကို စိတ်ဓါတ်
ဲနေတတ် ကြသည်။ စာပေအနုပညာတွင်
အထူးဝါသနာထုံ သူများဖြစ်ကြသည်။ အမည်နှစ်ခုနှင့်အောင်မြင်တတ် ကြသည်။
ရှေ့ဖြစ်ဟောပြောသောပညာများတွင် အထူး ပါရမီရှိသူများဖြစ်ကြသည်။
ထူးခြားသောဒဿန တေးကဗျာတို့ကို အမြဲရွတ်ဆိုနေတတ်ကြသည်။ ဘဝခရီးနှင့်ပတ်သက်၍
အလုပ်အကိုင်ကိစ္စနှင့် နေအိမ်ကိစ္စတွင် သုံးကြိမ်အပြောင်းအလဲကြုံပြီးေ
အထူးကောင်း မွန်အောင်မြင်တတ်ကြသည်။ ကျန်းမာရေးတွင်
ခံစားရ တတ်သည်။ ဘဝသက်တာလာဘ်ရွှင်ကံကောင်း
နေစေရန် အစိမ်းရောင်နှင့် နို့နှစ်ရောင်များများ ဆောင်ပါ။
ဘဝသက်တာဆောင်သင့်သည့် ကျောက်မျက်ရတနာမှာ ပုလဲနှင့်ကြောင်ကျောက် ဖြစ်၏။
နှစ်စဉ်မည်သည့်လတွင်မဆို (၈) ရက်၊ (၁၇) ရက်၊ (၂၆)
ရက်တို့တွင်မွေးဖွားသူများသည် ၈ ဂဏန်းသမားများဖြစ်ကြသည်။ တားရော့
သင်္ကေတမှာ စွမ်းအားရှင် သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ၈ ဂဏန်းသမားများသည်
ထူးကဲစွာအောင်မြင်တတ် ကြသည်။ ဘဝသက်တာတွင်ကိုယ့်ဆန္ဒထက်
ချုပ်ကိုင်ထား ခြင်းကို ခံရတတ်ကြသည်။ တစ်ကိုယ်တော်
လက်သည်းဝှက်နေတတ်ကြသည်။ ခေါင်းမာ ပြီး
တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်ကြသည်။ အဖက်ဖက်မှ ထက်မြက်ပြီး မေတ္တာရေးတွင်
မိမိရွှေးချယ်ထား သူကိုလက်လွှတ်ရပြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုရတတ်သည်။
ကသည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အသည်းရောင် အသားဝါရောဂါ၊
ဆီးရောများ ခံစား ရတတ်သည်။ ဘဝသက်တာလာဘ်ရွှင်ကံကောင်း နေစေရန် အပြာရောင်၊
အနက်ရောင်၊ နက်ပြာရောင် များများဆောင်ပါ။ ဘဝသက်တာဆောင်သင့်သည့်
ကျောက်မျက်ရတနာမှာ မဟူရာကျောက်နှင့်ရေသံ တို့ဖြစ်၏။
နှစ်စဉ်မည်သည့်လတွင်မဆို (၉) ရက်၊ (၁၈) ရက်၊ (၂၇)
ရက်တို့တွင်မွေးဖွားသူများသည် ၉ ဂဏန်းသမားများဖြစ်ကြသည်။ တားရော့
သင်္ကေတမှာ မီးအိမ်လက်ဆွဲခရီးသည်တစ်ဦး၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။ မီးအိမ်၊
တောင်ဝှေးတို့ကိုင် ဆောင်၍ သစ္စာတရားကိုရှာဖွေနေသော ခရီးသည်
တစ်ဦး၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ၉ ဂဏန်းသမားများ သည် ဘဝအစတွင်ကြမ်းတမ်းတတ်ကြသည်။
မောင်နှမသားချင်းတို့ထက်ပိုမို၍ ကြမ်းတမ်းခက်ခဲ တတ်ကြသည်။
မိမိအပေါ်နားလည်နိုင်သူ နည်း တတ်ကြသည်။ အညှိုးအတေးကြီးသူများဖြစ်ကြ သည်။
ဂလဲ့စားချေလိုတတ်ကြသည်။ မိမိအပေါ် စီးပိုးခြင်းကိုလုံးဝမကြိုက်၊
ခေါင်းဆောင်နေရာ မရက ဘာမျှမလုပ်လိုတတ်ကြချေ။ အချိန်အခါနှင့်
အခြေအနေကိုစောင့်တတ်ကြသည်။ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ဒါဏ်ရာများစွာရရှိတတ်ကြသည်။
အဖက် ဖက်မှ အခက်အခဲများစွာကို ဇွဲနှင့်စွဲမြဲစွာလုပ်ကိုင် မှသာ
ရတတ် ကြသည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုယ့်ထက်ငယ်သော
အမျိုးသားနှင့်ရတတ်ကြသည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အပူလောင်ခြင်း၊
ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရတတ်ခြင်းကြုံ တတ်သည်။ ဘဝသက်တာကံကောင်းလာဘ်ရွှင် နေစေရန်
အနီရောင်၊ ကြက်သွေးရောင်များများ ဆောင်ပါ။ ဘဝသက်တာဆောင်သင့်သည့် ကျောက်
မျက်ရတနာမှာ ပတ္တမြားနှင့်ကျောက်အနီ ဖြစ်သည်။
မွေးဂဏန်း(၂)သမားများသည် ကိစ္စကြီးငယ်ကြုံပါက၊ အခက်အခဲတစ်ခုခုကြုံပါ
မွေးဂဏန်း (၃)သမားများသည် အခက် အခဲတစ်ခုခုကြုံပါကမိခင်ကိုကန်ေ
ဇူးကို အာရုံပြု ပါ။
(မိခင်ကိုလည်းကာယကံမြောက်ကန်တော့ပါ။) ထူးကဲစွာ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မည်။
မွေးဂဏန်း (၄)သမားများသည် လိုအင် ဆန္ဒတစ်ခုခုရှိလာပါက
တန်ခိုးကြီးဘုရားတွေကို လှည့်လည်ပြီး ဖူးကာဆုတောင်းပါ။ ၄-ရက်တိတိ
မွေးဂဏန်း (၅)သမားများသည် ကိစ္စ ကြီးငယ် ကြုံပါကဘုန်းတော်ကြီးများကိုဆွ
(၇)ဂဏန်းသမားများသည်ကိစ္စအထူး ကြုံပါကတရားရိပ်သာတစ်ခုကို သွားပြီးဝေယျာဝစ္စ
ကုသိုလ်ယူပါ။ သို့မဟုတ် ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းသို့
သွားပြီးဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်ယူပါ။ သို့မဟုတ် စေတီတစ်ဆူဆူမှာ တံမြက်လှည်းပါ။
(၈)ဂဏန်းသမားများသည် ကိစ္စတစ်ခုခု ကြုံပါကလမ်းပေါ်မှ
ခွေးလေခွေးလွင့်လေးတွေကို အစာကျွေးပါ။ ဆန်ကွဲနှင့်ငါးရိုးကိုကြိုပြီး
ကျကျနန ကျွေးပါ။ ညအချိန်များမှာကျွေးပါ။ (၈)ရက်တိတိ လုပ်ပါ။
(၉)ဂဏန်းသမားများသည် ကိစ္စကြီးငယ် ကြုံကစေတီကိုးဆူမှာအဓိဋ္ဌာန်ဝင်ပါ
တစ်ချို့ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့
ဆရာသက်နှင်းဆွေ (ပုပ္ပါး) မှကူးယူတင်ပြပါသည် .........
A man withafoggy clouds over him. He is sensitive and easily hurt and always feels lonely. He
does not trust anyone but himself. Sounding so negative, but he has an amazingly charisma.
He isacompassionate man . He absorbs other people sentimental feeling and pain.
He isagood psychiatrist and he could understand complex and confused feeling. He has a
hidden power that he could use it to make things happen and do things well. He does not like
people who never try to help themselves before asking other people for favors. He is the type
of guy who mostly achieved his goal in life.Once he sets his mind for something, he will put all
his energy and efforts in it , whether or not it isasmall matter orabig project. One of the
most successful man in all the Zodiac.
He isavery patient man and can waits for years to reach his goal. He hates thin feeling and
weak determinations. He can not retreat or rest for long, for he thinks life has more questions
and more answer to be searched.
If he is in love, you will get plenty of love from him, sometimes may be too much than you
have asked for. He is serious about love and relationship and will not waste time with someone
he does not love whether how pretty she is.
He hardly makes mistake. He could tell if you have any bad thought, and will not hesitate to tell
you so. If you do not like straight forward sincere man, then pack your bag now. If you are an
over sensitive person, try not to ask for his comments. He will tell you the truth, even you
might not be able to take it. Example , if you ask him if you are fat (and you are fat), he will
say "yes, as big asaballoon". He makes such comments because he cares
If he says "you look pretty today", you can be proud because he will not say such think just to
please you if he does not really mean it. There will be both kind of people, those who like him
and those who hate him. If you are in love this guy, be strong and belief in your decision, do
not be vulnerable. He remembers all his anger and will wait for his pay back time.
He is very serious about your promise, do not promise something you could not keep. He loves
his friends and will do anything for his close friends. He likes you to take care of him, but not in
front of his friend. He isacomplex man and you will never understand what he means if you do
not really know him. He is happy to know he isacomplex figure. When he is thinking or
He memorize everything well. You may say something that you already forgotten, but he will
remember every words. He wants to be respected and admired and at the same time he does
not like people to have power over him.
When he falls in love, he really falls deep. A man in this Zodiac once in love, he will be sweeter
than sugar. He does not likeaplain and simple woman. A complex woman's mind is his
venture. Always be interesting and able to talk to him about every things in any subjects. He
does not likeawoman who sits around waiting for his call.
“Life isamarathon notasprint. And you must prepare accordingly.
Unlike sprinters who focus on how fast they can get to the finish
line, endurance athletes have no finish line. There is only the
present moment in which they must remain connected to their body,
in tune with their every move. Inaplace that feels comfortable and
productive and that they are able to maintain indefinitely. People
today have challenges that are comparable to an endurance event
that seemingly never ends. We have to get up earlier, work longer
hours, and attempt to carve out high quality family or personal time.
Then we have to wake up the next day and do it again and again
To be productive in the long run of life you have to pace yourself in
order to feel strong, alert and energetic. With the right pace, with
the right mindset, with the right diet, anything is possible, constant
energy, feeling as strong at the end of the day as when you started
and maintainingaconsistently positive attitude. For most of my life
I’ve beenaprofessional endurance athlete. And now, like you, I am
participating in the marathon of life. I still run every day. I manage
a business. I raiseafamily with my wife. Running gives me the
energy to do this. No matter what’s going on in my life, I run a
couple of hoursaday. Not because I think I have to, but because I
am certain that when I am moving I feel great. I also know that
after I run I will have even more energy for the rest of the day. I’ll
be able to think more clearly. I’ll be able to concentrate better. I’ll
feel more relaxed and at ease.
When I’m in this state anything and everything is possible. The
experience is magical. I consider itagift, one that ignites my life’s
mission, which is to get people to transform movement into an act
that is absolutely satisfying. I recognize that in order to receive the
gift that running offers me, I have to commit some of my time. Yet
in this instance, the relinquishing of my time actually creates more
time. An hour set aside for generating reliable and everlasting
energy frees up two to three or more hours inaday that might have
otherwise have been allocated to sleep or rest. Suppose you could
sleep less yet feel even more rested and alive. What would you do
with the extra hours that suddenly appeared in your day?”
Slow Burn by Stu Mittleman.
မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာနေတဲ့ ပိုလာဝက်ဝံရဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ကြားဖူးပါသလား….?
အေးခဲတဲ့ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာ ပိုလာဝက်ဝံတွေဟာ ဘုရင်တစ်ဆူလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် အက်စကီးမိုး လူမျိုးတွေက ဘာမှအင်အား ထုတ်စရာမလိုဘဲ အဲဒီဝက်ဝံတွေကိုဖမ်းနိုင်တယ်။
ဘယ်လိုဖမ်းသလဲဆိုတော့ အက်စကီးမိုးတွေက ဖျံတစ်ကောင်ကို အရင်သတ်လိုက်ပြီး ဖျံရဲ့သွေးကို ပုံးတစ်ခုထဲထည့်ထားလိုက်တယ်။ အသွားနှစ်ဖက်ပါတဲ့ ဓါးမြှောင်ကို သွေးထဲမှာ စိုက်ထားလိုက်တယ်။ အရမ်းအေးတဲ့Aတွက် ဖျံသွေးဟာအချိန်တိုအတွင်းမှာ ခဲသွားပါတယ်။ အဲဒီခဲသွားတဲ့ ဓါးမြှောင်ပါတဲ့ ဖျံသွေးကို ပုံးထဲကထုတ်ပြီး ရေခဲပြင်မှာ ပစ်ထားလိုက်ရုံပါပဲ။၀က်ဝံတွေက သွေးအရမ်းကြိုက်တယ်။ အဲဒီအကြိုက်ကပဲ သူတို့ကို သေမင်းလက်ထဲ ရောက်စေခဲ့တယ်။ အနံ့ခံကောင်းတဲ့ သူတို့ဟာ သွေးညှီနံ့ကို အဝေးကြီးကတောင် ရနိုင်ပါတယ်။ အက်စကီးမိုးတို့ ပစ်ထားတဲ့ သွေးခဲကို ခြေရာခံပြီး တွေ့တာနဲ့ အငမ်းမရ လျှာနဲ့ စတင်လျက်ပါတော့တယ်။ လျက်ရင်း လျက်ရင်း လျှာခဲသွားလည်း အစာကောင်းကို လက်မလွတ်ချင်တာနဲ့ဆက်လျက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ခဲနေတဲ့သွေးက ပိုချိုလာတယ်။ ပိုလတ်ဆတ်လာတယ်။ ပိုပူနွေးလာတယ်ဆိုကို သတိမထားမိတော့တဲ့အထိပါပဲ။
လျက်လေ အရသာရှိလေ၊ အရသာရှိလေ လျက်လေနဲ့ သူတို့ရဲ့သွေးကို သူတို့ သောက်နေမိမှန်းတောင် မသိကြတော့ပါဘူး။အကြောင်းက
သွေးခဲအလယ်မှာ စိုက်ထားတဲ့ ဓားက လျက်နေတဲ့ သူတို့လျှာကို လှီးဖြတ်နေခဲ့လို့ပဲ။ အအေးဓာတ်ကြောင့် ထုံနေတဲ့ လျှာက နာကျင်တာကို မခံစားမိတော့ဘူး။ အနံ့ခံကောင်းတဲ့ နှာခေါင်းက လတ်ဆတ်တဲ့ သွေးနံ့ရလေ လျက်နှုန်းက မြန်လေလေ နောက်တော့ ကိုယ့်သွေးကို ကိုယ်ပြန်သောက်နေမိတော့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သွေးထွက်လွန်ပြီး မူးလဲသွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အက်စကီးမိုးတွေက သူတို့ကို ဘာအင်အားမှ မသုံးဘဲ ဖမ်းလိုက်ရုံပါပဲ။ - ဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆတွေ လွဲမှားခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ဟာလည်း ပိုလာဝက်ဝံနဲ့ တူသွားနိုင်တယ်။ တစ်ချို့လူတွေက အလုပ်ချိန် များများလုပ်လေ ပိုအောင်မြင်လေလေ ၀င်ငွေများများ ရလေလေလို့ ထင်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ အဲဒီငွေကြေးကို ဖြုန်းဖို့ အချိန်မရှိခဲ့ကြဘူး။ တစ်ချို့ အဲဒီငွေကြေးကို ဘယ်လိုသုံးရမယ်မှန်းမသိကြဘူး။
၀င်ငွေများလာတာနဲ့နည်းတူ တစ်ဖက်မှာလည်း တစ်ချို့အရာတွေကို သူတို့ဆုံးရှုံး ကြရတယ်။ လူ့ဘ၀ရဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အရာဖြစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့အတူနေတဲ့ အချိန်တွေ၊ နွေးထွေးတဲ့ မိဘမေတ္တာငတ်နေတဲ့ သားသမီးတွေ၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူတစ်ဖက်သားကိုကူညီဖို့အရေးဆိုတာကိုတောင်သူတို့မေ့နေခဲ့ကြတယ်။ အမေရိကားရဲ့ အပတ်ဉ် ဂျာနယ်တစ်ခုက အငြိမ်းစားယူကုန်ကြတဲ့ ထိပ်သီးစီးပွါးရေး ပညာရှင် ဆယ်ဦးကို မေးခွန်းမေးပြီး စာရင်းလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ မေးခွန်းက “ တကယ်လို့ ဘ၀ကို အသစ်ပြန်စရရင် သင်အမျှော်လင့်ဆုံးနဲ့ လက်မလွတ်ချင်ဆုံးအရာက ဘာလဲ” တဲ့။ ပညာရှင် ခုနှစ်ဦးက တူညီတဲ့ အဖြေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ အဖြေက “ တကယ်လို့ ဘ၀ကို အသစ်ပြန်စရရင်သားသမီးတွေနဲ့ အတူနေတဲ့အချိန်ကို လက်မလွတ် ချင်ဆုံးပါ” လို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။
တစ်ချို့လူတွေက ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် နောင်တမရဘူးလို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မဆုံးဖြတ်ခင် သေချာ မစဉ်းစားခဲ့ရင်နောက်ဆုံးတော့ နောင်တ ရကြစမြဲပါပဲ။ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောဖူးပါတယ်။
ငွေဟာ ရှာလို့မကုန်နိုင်တဲ့ အရာပါတဲ့… ရှာလေလေ ရလေလေ လိုချင်လေလေ နောက်ဆုံးတော့ လုံလောက်ပြီလို့ မထင်ဘဲငွေနောက်ကိုပဲ ကောက်ကောက်ပါ ကုန်ကြတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပိုလာဝက်ဝံလို ကိုယ့်သွေးကို သောက်ပြီးပျော်နေကြတဲ့လူ ဖြစ်နေခဲ့ပြီလား…?
တင်းတိမ် ရောင့်ရဲနိုင်တဲ့လူက ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲဘူး။ မတင်းတိမ်နိုင်တဲ့လူက အမြဲဆင်းရဲနေတယ်။
ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်ကနေ တစ်တိုင်ကို အလင်းကူးပေးတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်ဆီက အလင်းရောင်မလျော့သလို အခြားသူဆီမှာလည်း ပိုမို ထွန်းလင်းလာတဲ့အတွက် လောကရဲ့ အမှောင်တွေကို ပိုလို့ ဖယ်ရှားစွမ်းနိုင်ပါတယ် ...။
မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ပြုပြင် သင့်သော အကြောင်းအရာများ
"---ကလေးငယ်သေးသေးလေးကို ကိုယ်တုံးလုံးချွတ် အမြဲထားလျက် ပိုက်ဆံ လိုက်လံတောင်းရမ်းနေသူများ---"
မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြီး ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာသည် နှင့်အမျှ အောက်ဖေါ်ပြပါလိုအပ်ချက် အနည်းငယ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး အမြန်ဆုံး ပြုပြင် ပြောင်းလဲ အကောင်အထည် ဖေါ်သင့်ပြီ လို့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်၊
(၁) ၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရ အသိအမှတ်ပြု တရားဝင်ငွေလဲလှယ်ခွင့် လိုင်စင်ရယူထားကြသော ဘဏ်လုပ်ငန်း များ နှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာန ( zone fee ) ကောက်ခံရာနေရာများအားလုံး၊ ( နိုင်ငံခြားငွေ ဒေါ်လာငွေ မျက်နှာ နည်းနည်းပွန်း၊ နည်းနည်း နွမ်း များကို) လက်ခံမယူခြင်း ကိစ္စ၊
နိုင်ငံခြားသားတိုင်း ရန်ကုန်လေဆိပ် ၀င်ဝင်ခြင်း မြန်မာပြည်သို့ရောက်ရောက်ခြင်း ဆောက်နဲ့ ထွင်းခံရသောအခြေအနေ ဖြစ်ပါသည်၊ ( နိုင်ငံတော်အစိုးရပိုင် ဗဟိုဘဏ်က လက်မခံသောကြောင့်ဟု ဆိုပါသည်၊ )
တရားမ၀င်ပြင်ပ ငွေလဲလှယ်ရာနေရာများတွင် ၊ black market များတွင်၊ မြန်မာငွေ ၂၀ကျပ် လောက် အကွာ ဖြင့်လဲလှယ်လက်ခံပေးနိုင်ပါသည်၊ ပြင်ပ black market များက ငွေ အနွမ်း၊ အကြေကို လက်ခံ နိုင်ပြီး. အစိုးရ ဗဟိုဘဏ်က လက်မခံ လို့ အစိုးရ တရားဝင်လိုင်စင်ရ ငွေလဲလှယ်ခွင့် ရှိ ဘဏ် များမှာ လက်မခံ ခြင်းဖြစ်သည် ဟု့ ဆိုလာသည်၊
(၂)၊ ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေ ဘုရား ဖိနပ်စောင့် အလှုခံပုံးအတွင်းသို့ အတင်းအဓမ္မ ငွေကြေးအလှုငွေ ထည့်ခိုင်းသော အလှုခံပုံး အစောင့် ကိစ္စ၊
မြန်မာပြည် အနှံ့ ဘုရားများတွင် မဖြစ်မနေ ဖိနပ်ချွတ်ရပြီး အဆိုပါဖိနပ်အား စောင့်ကြည့်ရန် အစောင့်ထားသလို အလှုခံပုံးထားရှိပါသည်၊
အလှုခံပုံးဟု သာ ရေးသားထားသော်ငြားလည်း သဒ္ဒါ ပေါက်သလို ထည့်ခွင့် မရှိဘဲ အတင်းအဓမ္မ ငွေ အလှုခံခြင်း နှင့် အလှုငွေ ထည့်ခိုင်းခြင်း ကို မည်သို့ ဖြေရှင်းမည်နည်း၊
(၃)၊ ဆူးလေဘုရား၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရား တို့တွင် နိုင်ငံခြားသားများအား ၀င်ကြေး ၂ ဒေါ်လာ ကောက်ခံသလို နိုင်ငံခြားသားများ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန်အတွက်လဲservice ရေအိမ်သာ များ သန့်ရှင်းစွာ ဆောက်ပေးသင့်ခြင်း၊
(၄)၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး၊ မြို့လည်ခေါင် ဆူးလေ တစ်ဝိုက်၊ တရုတ်တန်း နေရာများတွင် အခပေး Mobile - Toilet များ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ခြင်း၊
(၅)၊ မန္တလေးမြို့၊ အင်းဝ ရှေးဟောင်း မြို့တော် ရှိ လမ်း များ အသွားအလာခက်လောက်အောင် ပျက်စီးယိုယွင်းနေခြင်း နှင့် မြည်းလှည်းများ ၏ ကြံ့ခိုင်ရေး ခိုင်ခန့်မှု လုံခြုံစိတ်ချရမှု နည်းပါးနေခြင်း အတွက် မည်သို့ အဖြေရှာ သင့်ပါသနည်း၊
( လမ်းပြုပြင်ရေး အတွက် နိုင်ငံတော် အစိုးရလမ်းတံတား ဌာနက အမြန်ဆုံး တာဝန်ယူသင့်ပါသည်၊ )
( မြင်းလှည်းများ ကြံ့ခိုင် လုံခြုံမှုရှိပြီး မြည်းလှည်းပေါ်တွင် ထိုင်စီးရသော ဧည့်သည်များ သက့်တောင့် သက်သာမှု ရှိစေရန် ကူရှင်ဆိုဖာ အထူစားများ အစားထိုးသုံးစွဲခြင်း၊ မြင်းလှည်းများအား ဆေးသုတ်ခြင်း၊ တောင့်တင်းခိုင်ခန့်စေရန် ၊ သပ်ရပ်လှပစေရန်.၊ ပြင်လည် ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နိုင်စေရန် ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ရေး မှ အစည်းအဝေးများစွာပြုလုပ်ပြီး သိန်းပေါင်းများစွာ ကုန်ကျမည့် ငွေများထဲမှာ လက်တွေ့ ကျစွာ အသေးစားချေးငွေများ သို့ မဟုတ် ထောက်ပံ့မှု များ စသဖြင့် နည်းလမ်းအမြန်ရှာသင့်ပေသည်၊ )
(၆)၊ မန္တလေး -မင်းကွန်း သွား မော်တော် များ ၊ စစ်တွေ- မြောက်ဦးသွားမော်တော်များ တွင် life - jacket များလုံလောက်စွာ မပါရှိခြင်း နှင့် ပါရှိပါကလဲ ၁၀ မိနစ် မကြာမှီ ရေမြုတ် နိုင်သော အပေါစား life- jacket များသာကို တွေ့မြင်နေရဆဲဖြစ်ခြင်း၊
( အဆိုပါကိစ္စ ကို၂၀၁၁၊ သြဂုတ်လ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တွင် ဓာတ်ပုံသက်သေများဖြင့် ဖေါ်ပြ တင်ပြ ပြီးသားဖြစ်သော်ငြားလဲ ထူးခြားမှု၊ တိုးတက်မှု တစ်စုံတစ်စုံတစ်ရာ ပွင်းလင်းမြင်သာစွာ မရှိ၊ မတွေ့မြင်ရသေးခြင်း၊ )
(၇)၊ အမရပူရ ဦးပိန်တံတား အောက်ခြေ ရှိ သစ်သားတိုင် တော်တော်များများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလှပြီ ဖြစ်သဖြင့် သဘာဝဒဏ် များကြောင့် အလွန်အမင်းပျက်စီးယိုယွင်းစ ပြုနေပါသည်၊ တံတားအောက်ခြေ သို့ ဖြတ်ပြီး လက်လှော်သမ္မန် ငယ်ဖြင့် သွားရောက် ကြည့်ရှု ပါက အလွန်သိသာစွာ မြင်ရပါလိမ့်မည်၊ အပေါ် တွင် ဖြတ်လျှောက် နေကြသော လူပေါင်းများစွာ အတွက် စိုးရိမ်စရာ အနေအထား တွင် ရှိနေသည်ဟု့ ယူဆမိပါသည်၊ ပညာရှင် များဖြင့် တိုင်ပင်၍ မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် သင့်သည်ကို စတင်ပြုလုပ်သင့်ပြီဟု ထင်ပါသည်၊
(၈)၊ ရွှေပိဿချိန်များစွာဖြင့် စံပယ်နေသော မန္တလေးမြို့ကျက်သရေဆောင် မဟာမုနိဘုရားကြီး၊ ( နိုင်ငံခြားသားများအနေ အမြင်ကတော့ ရုပ်တုကြီး ဟု့သာ သတ်မှတ်ပြောဆိုပါသည်)
အဆိုပါ ရွှေပိန်းချ ဘုရားဝင်းအတွင်းရှိ စားစရာ မရှိဟု့ ညီးတွားလျှက် နိုင်ငံခြားသားများကို target ထားပြီး ပိန်လှီညှော်ညှာနေသော လမစေ့ ပုံစံ ကလေးငယ်သေးသေးလေးကို ကိုယ်တုံးလုံးချွတ် အမြဲထားလျက် ပိုက်ဆံ လိုက်လံတောင်းရမ်းနေသူများကို လည်းကောင်း၊ ရွှေပိန်းချ ဘုရားကြီး ရင်ပြင်တော် တွင် စုတ်ပြတ်သတ်စွာ ပြစ်ချထားသော အမှိုက်များ၊ ခွေးချေး၊ ခိုချေး၊ လူချေးပေါင်းစုံများကို မည်သည့် နည်းလမ်းများ၊ နည်းစနစ်များ၊ ဥပဒေများ၊ ထားပြီး အဖြေရှာ ဖြေရှင်းသင့်ပါသနည်း။
(၉)၊ မုံရွာမြို့ နယ်၊ သမိုင်းဝင်ဖိုဝင်တောင်နေရာတွင် မျောက်စာ ရောင်းသူများ၊
( ၊ မျောက်စာ မြေပဲထုတ်များကို စက္ကူ စ များဖြင့်ထုတ်၍ မျောက်များကို ကျွေးမွေးပြီး စုတ်ပြဲပွစိလန်နေသော စက္ကူ အမှိုက်ပေါင်းများစွာ ကို နေရာတကာတွင် တွေ့မြင်နေရပါသည်၊ )
မျောက်စာသည် များ ဈေးမရောင်းရဟု သတ်မှတ်စည်းကမ်းထားခြင်းထက် ရန်ကုန်မြို့ ဘုရားဝင်းများအနီးတွင်ရောင်းချနေကြသော ခိုစာသည်များ ကုလားပဲစေ့များကို ပန်းကန်ပြားပေါ်ထည့်ပြီး ရောင်းသလို ၊ မျောက်စာမြေပဲ များကို ပန်းကန်ပြားများ အတွင်း ထည့် သွင်းရောင်းချ ခိုင်းခြင်းမျိုးဖြင့် အမှိုက်စက္ကူ မပွရှုပ်စေခြင်း ကဲ့သို့ အဖြေရှာမှုများ၊
(၁၀)၊ နိုင်ငံခြားသား အများဆုံးလာရောက်သည့် ပုဂံရှေးဟောင်း မြို့တော် ရှိ အသုံးဝင်သော ဖြတ်လမ်းများ ဖြစ်သည့် ဓမ္မရာဇိကဘုရား ၀င်းဘေး ကပ်ရပ် ဖြတ်လမ်း မှ ဓမ္မရံကြီး - စူဌာမဏိ ဘုရား -ဆူဟာတို လမ်းမ အထိပေါက်သော ဖြတ်လမ်း များကို ကတ္တရာလမ်း မခင်းနိုင် သော်ငြားလည်း ကျောက်ခဲလမ်းများခင်းစေ၍ မြေညီဖြစ်အောင် ညှိပေးသင့်ခြင်း၊
(၁၁)၊ ရှေးဟောင်း ပုဂံမြို့တော် တွင် သဗညုဘုရား အနီး၊ ရွှေဆံတော်ဘုရား အနီးတို့တွင် ခေတ်မှီရေအိမ်သာများ တည်ဆောက်ပေးခဲ့သော ဟိုတယ်ခရီး ၀န်ကြီးဌာန အား ကျေးဇူးတင်ရှိမှု နှင့် အတူ ရွှေစည်းခုံဘုရား အနီး၊ ညောင်ဦးဈေး အနီး၊ မင်းနန်သူရွာဘက်ခြမ်းများတွင် လည်း ထပ်မံ ဆောက်ထားပေးနိုင်ပါက အလွန်ကောင်း မွန်မည်ဖြစ်ခြင်း၊
( ၁၂ )၊ အင်းလေး ဒေသရှိ နိုင်ငံခြာသားများ စီးနင်းလိုက်ပါသည့် စက်လှေများတွင် ညဘက်ခရီးစဉ် များအတွက် သိသာထင်ရှားစေရန်သော်၎င်း၊ စက်လှေအချင်းချင်း ရှောင်ရှားနိုင်ရန်. ယာဉ်တိုက်မှု မဖြစ်နိုင်စေရန်၊ ရောင်ပြန်ပြားများ တတ်ဆင်ပေးသင့်ခြင်း၊
( ၁၃ )၊ အင်းလေးကန်အသွား၊ ညောင်ရွှေ မြို့ လှေဆိပ်တွင် သန့်ရှင်းသော Mobile - Toilet များ ထားရှိပေးသင့်ခြင်း၊
( ၁၃ )၊ မန္တလေး-မင်းကွန်း-အင်းဝ- အင်းလေး - ဒေသများတွင် ရှိသော ကမ်းစပ်၊ ကမ်းနား အဆင်းအတက် ကုန်းဘောင် များ၊ ဆိပ်ခံ သစ်သားတံတားများ ခိုင်မာကြံ့ခိုင်မှု ရှိစေရန် စစ်ဆေး အရေးယူပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပေးသင့်ခြင်း၊
(၁၄)၊ ပုဂံ၊ အင်းလေး ဒေသများတွင် နိုင်ငံခြားသားများ အတွက်ကျန်းမာရေး SOS အရေးပေါ်ဌာန များ ဆေးဝါးအပြည့်အစုံဖြင့် ပြုလုပ်ပေးသင့်ခြင်း၊
( ၁၅ )၊ April 13 , 2012 . (http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en. ) Site တွင် ကျွန်မ တင်ပြပြီးဖြစ်သော ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားခရီးစဉ် ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ် အနေအထားများ၊ နှင့် ဆောင်ရွက်သင့်သည်များ၊ http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/d0118c3aeabf7c22?hl=en&
( ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ကိုင်နေကြသော ထောင့် ပေါင်းစုံမှ မည်သူ မဆို မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက်စေရန် အလို့ငှာ ဝေဖန် အကြံပေး ထောက်ပြ ဖြည့်စွက် မှု များ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်၊ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်၊ )
Revamp the hiring process ကို ဘာသာ ပြန်စာလေး ရေးပါမည် ။ Revamp ဆိုတာ change or arrange something again လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါသည် ။ hirings and firings အလုပ်ခန့်ခြင်း နှင့် အလုပ်ဖြုတ်ခြင်း နှစ်မျိုးကို လူသိများကြပါသည် ။ ဒီဆောင်းပါက အလုပ်ခန့်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောင်းလဲမှုများ မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း ဆိုတဲ့ အကြံပေးချက်များကို ဖော်ပြထားပါသည် ။
Hudsom Report ၏ ဖော်ပြချက်အရ စင်ကာပူရှိ အလုပ်ရှာဖွေသူများ job seekers တွေဟာ အလုပ်ကမ်းလှမ်းခြင်းကို လက်ခံခြင်း accepting an offer ထက် ၊ အလုပ်ကမ်းလှမ်းခြင်းကို ငြင်းဆန်ခြင်း turning down job offers အရေအတွက် ပိုများနေသည်ကို နှိုင်းယှဉ်ချက်များအရ သိရှိရပါသည် ။
ဒီလို ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပိုမိုများပြားလာတဲ့ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး ဈေးကွက်ကြီး buoyant job market ထဲမှာ အလုပ်ရှင် employers တွေဟာ အဓိက ခေါင်းကိုက်မှု ပြဿနာကြီး နှစ်ခုကို ကြုံတွေ့ရပါသည် ။ တစ်ခုက အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဝန်ထမ်း quality staff များကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်း how to retain လုပ်မလဲ ၊ နောက်တစ်ခုက အလုပ်အတွက် အမှန်အကန်လိုအပ်နေတဲ့ the right person ကို မြန်နိုင်သမျ မြန်မြန် ဘယ်လို ငှားရမ်း how to hire လုပ်မလဲ ဆိုတာပဲ ဖြစ်သည် ။
Interviewing လုပ်ကြတဲ့အခါမှာ အကောင်းဆုံး အလုပ်လျှောက်လွှာပိုင်ရှင် the best candidate ကို ရွေးချယ်ဖို့ subjective and objective အဓိက နှင့် သာမည ကို ကြည့်ကြပါသည် ။ This is not always the case လို့ပြောပါသည် ။ ဒီနေရာမှာ not the case = not true ကို ပြောခြင်းဖြစ်သည် ။
သူတို့၏ အသုံးအနှုန်းအရ subjective techniques ထဲမှာ ဘာတွေ ပါဝင်သလဲဆိုတော့ resume reviews အလုပ်လျှောက်လွှာ CV ကို ဖတ်မယ် ၊ face-to-face interviews မျက်နှာခြင်းဆိုင် အင်တာဗျူးမယ် ၊ self-assessments လို့ခေါ်တဲ့ အရည်အချင်းစစ် test ၊ ဥပမာ – personality tests, ability tests လေးတွေ လုပ်တတ် ကြပါသည် ။ Resume ဆိုတာက သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ ကြိုက်သလို လိမ်ညာ ရေးလို့ ရပါသည် ။
အင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာလည်း အများစုက မုသားမပါ လင်္ကာမချော ဆိုသည့်အတိုင်း bluffing အလိမ်အညာ စကားတွေ ထွေရာလေးပါး ပြောဖြစ်ခဲ့ပါသည် ။ Subjective Assessment တစ်ခုထဲ ကြည့်ပြီး အလုပ်ခန့်မယ်ဆိုရင်တော့ extremely risky စွန့်စားလွန်းပါသည် ။
Objective Assessments အရ knowledge , skills, ability တွေကို test လုပ်မယ် ၊ background ကို check လုပ်ပါသည် ။ ဒီလို objective and subjective assessments များကို ညီတူညီမျ blend လုပ်ခြင်း ၊ blend ဆိုတာ mix or combine together လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အလုပ်ခေါ်ယူခန့်ထားခြင်းတွေကို ပိုမိုကောင်မွန်စွာနဲ့ အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်သည် ။
ဒီလိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးကျေးဇူး သုံးခုကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည် ။ အဲဒါတွေကတော့ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အလုပ်သမားငှားရမ်းခြင်း အလုပ်တွေကို ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း ၊ reduced turnover အလုပ်သမားအသစ်ရှာဖွေခန့်ထားရခြင်းကို လျှော့ချနိုင်ခြင်း ၊ ဒီနေရာမှာ turnover ဆိုတာ အလုပ်သမား သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်က company မှာ ထွက်သွားလို့ company က လူစားထိုးဖို့ နောက်ထပ် လူသစ်တစ်ယောက်ကို ခေါ်ယူခန့်ထားခြင်းကို ဆိုလိုပါသည် ။
အလုပ်သမားငှားရမ်း ခေါ်ယူခန့်ထားရခြင်း အလုပ်များကို လုပ်ဆောင်သည့်နေရာမှာ company ဘက်က အချိန် time ၊ စွမ်းရည် energy များကို အလေအလွှင့် မရှိစေဘဲ အသုံးချနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါသည် ။
Ellen Bialystok ဆိုသူဟာ cognitive လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်နဲ့ ပတ်သက်သော စိတ်ပညာရှင် neuroscientist တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ neurosis ဆိုတာ mantel illness စိတ်ဝေဒနာ ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ် ။ သူဟာ bilingualism လို့ခေါ်တဲ့ two languages ဘာသာစကား နှစ်မျိုးကို အသုံးပြုပြီး ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းဟာ စိတ်ကို ဘယ်လို ထက်မြတ်မှု ဖြစ်စေသလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ နှစ်ပေါင်း လေးဆယ် နီးပါး လေ့လာမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
ဘာသာစကား နှစ်မျိုး အသုံးပြုခြင်း ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကတော့ Alzheimer’s disease လို့ခေါ်တဲ့ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ မှတ်ဥာဏ်မေ့လျှော့ခြင်း ၊ ပြောခဲ့တဲ့စကားများ မမှတ်မိခြင်း ၊ လှုပ်ရှားမှုများ နှေးကွေးလာခြင်း ၊ ကောင်းမွန်စွာ မတွေးခေါ်နိုင်ခြင်း စတဲ့ ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ မဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကာကွယ် တားဆီးပေး နိုင်ပါတယ် ။
Straits Times က သူနဲ့တွေ့ဆုံပြီး phone interview လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
billingualism ကို ဘယ်လို စတင် သင်ယူခဲ့တာလဲ လို့မေးတဲ့အခါမှာ သူက billingualism ဟာ ကောင်းလား ဆိုးလား သူမသိခဲ့ပါဘူးတဲ့ ။ သူဟာ how children acquire language ကလေးတွေဟာ ဘာသာစကာကို ဘယ်လို သင်ယူတတ်မြောက်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ project တစ်ခုကို လုပ်ပြီး စိတ်ပညာဆိုင်ရာ doctorate ဆိုတဲ့ highest degree ကို ရခဲ့ပါတယ် ။
၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာ သူဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒိနောက် PhDs ရဖို့အတွက် canada မှာ job shortage လေး သွားလုပ်ရပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ position က studying second language acquisition in school children ကျောင်းသားတွေ ဒုတိယဘာသာစကားတစ်ခုကို သင်ကြားတတ်မြောက်ခြင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး research project လုပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါဟာ သူကျွမ်းကျင်တဲ့ အပိုင်း မဟုတ်ပါဘူး ။ သူက စိတ်ပညာရှင်လေ ။ ဒါကို It isn’t my area လို့ပြောပါတယ် ။
သို့ပေမယ် စိတ်ပညာရှင် တစ်ယောက် အနေနဲ့ ကလေးတွေကို စိတ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလို second language ဟာ အတွေးအခေါ်ကို ဘယ်လို ပြောင်းလဲစေနိုင်သလဲ စတဲ့ မေးခွန်းတွေနောက်ကိုလိုက်ရပါတယ် ။ research ဆိုတာကလည်း မေးခွန်းတွေထုတ်ခြင်းပဲ မဟုတ်လား ။
အဲဒိလို research လုပ်နေရင်း monolingual and bilingual အကြား ကွားခြားမှုကြီးတစ်ခုabig difference ရှိတယ်ဆိုတာကို သိခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီလောက်ကတော့ ခန့်မှန်းကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ် ။ ဘာသာစကား အသစ်တစ်ခုကို လေ့လာတဲ့သူက စကားလုံးတွေ ၊ အသုံးအနှုန်းတွေ ၊ ပိုမိုကြွယ်ဝစွာ ပြောတတ် ၊ ရေးတတ် ၊ ခံစားတတ် ပါတယ် ။
ဒီလို ဖြစ်ရဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းက ဦးနှောက်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ စနစ်တစ်ခုရှိတယ် ။ executive control system်လို့ ခေါ်တယ် ။ သူက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းတွေ လုပ်တယ် ။ သူ့ရဲ့ အဓိက အလုပ်တစ်ခုက အနှောင့်အယှက်တွေကို လစ်လျူရှုထားလျက် အရာဝတ္ထုတွေကို အာရုံစိုက်ထားနိုင်ခြင်း ဖြစ်တယ် ။ တစ်ကြိမ်ထဲမှာ မတူညီတဲ့ အလုပ်နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်ထဲ လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ် ။
တကယ်လို့ သင်ဟာ ဘာသာစကား နှစ်မျိုးကို မကြာခဏ ပြောဆိုတယ်ဆို၇င် သင်စကားပြောတိုင်းမှာ brain’s network တွေဟာ အလုပ်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ် ။ စကားမပြောမှီ စကားလုံးတွေ လျှပ်တစ်ပျက် ပေါ်လာပြီးနောက် ဘယ်လိုစကားလုံးသုံးမလဲ ၊ ဘာစကားတွေပြောနေတာလဲ စသည်တို့ကို executive control system က ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ရပါတယ် ။
ထို့ကြောင့် bilinguals ကို သုံးခြင်းအားဖြင့် ဦးနှောက်ကို ပိုမို အလုပ်လုပ်စေပါတယ် ။ ဒီလို အလုပ်လုပ်စေခြင်းအားဖြင့် brain system ဟာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် နဲ့ အကျိုးရှိစေခြင်း ဖြစ်တယ် ။
လူနာ လေးရာကျော်ရဲ့ Alzheimer’s record တွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ ဘာသာစကား တစ်မျိုးထဲ ပြောတဲ့သူတွေထက် ဘာသာစကား နှစ်မျိုး ပြောတဲ့သူတွေဟာ ၅ နှစ် ၆ နှစ်လောက် ကြာမှ Alzheimer ရောဂါလက္ခဏာများ ပြသလာပါတယ် ။ ဘာသာစကား နှစ်မျိုး ပြောတတ်သူတွေမှာ Alzheimer ရောဂါ မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောခြင်း မဟုတ်ပါဘူး ။
ဘာသာစကား ပြောဆိုခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်ကို သန်မာစေတယ် makes brains stronger ၊ brain exercise လုပ်ခြင်းလည်း ဖြစ်တယ် ။
A little politeness in the office goesalong way …
လောက၀တ်အကြောင်းလေး ပြောပါရစေ ။
e-mail ပို့တဲ့အခါမှာ subject field ကို ဘာမှမရေးဘဲ blank မလုပ်ပါနဲ့ ။ e-mail လက်ခံသူ recipients မှာ တစ်ရက်အတွင်း clear လုပ်ဖို့ messages တွေ အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ် ။ သင်က ချက်ချင်း ပြန်ကြားစာ response လိုချင်တယ်ဆိုရင် အတိုချုပ် သို့သော် စာပါ အကြောင်းအရာကို တိုတိုနှင့်လိုရင်း ဖော်ပြထားရပါမယ် ။ သူတို့၏ အလုပ်ကို လွယ်ကူအောင် လုပ်ပေးခြင်းသည် သင့်ကိုယ်သင် အကူအညီပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည် ။
သင့်ရဲ့စာကို လူတိုင်းရဲ့ e-mail လိပ်စာတွေက သိဖို့လိုတယ် မလိုဘူး ဆိုတာကို သင်မသိရင် e-mail message တွင်ရှိသော “reply all” button ကို စိတ်အားထက်သန်မှုလွန်ကဲစွာ မနိပ့်ကြပါနဲ့ ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် သင့်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးသူ nuisance လို့သာ မြင်ကြပါလိမ့်မယ် ။
တစ်ရက် နှစ်ရက် အတွင်း email message များကို ဖြေကြားဖို့ အချိန်သတ်မှတ်ထားပါ ။
voicemail message များကိုလည်း အချိန်မှီ ဖြေကြားပေးပါ ။
သင့်အလုပ်မှာ ဖုန်းကိုအသုံးပြုရတော့မယ်ဆိုရင် တိုးတိုးလေးပြောပါ ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ စကားပြောသံကို မြင့်လိုက်ပါတယ် ။ ဒီအသံဟာ ဘယ်လောက်ကျယ်တယ်ဆိုတာ သဘောမပေါက်ကြဘူး ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရဖို့အတွက် စကားကို ကျယ်လောင်စွာ ပြောရမယ်လို့ပဲထင်တာ ။ တစ်ခါတစ်ရံ poor reception ဖုန်းလိုင်းမကောင်းတာလည်း ပါတာပေါ့ ။ ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင် သင်ဟာ ဒေါနှင့်မောနှင့် ပြောဆိုသည့်အခါ ဘေးမှာရှိသောလူတွေကို သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကစ္စ personal affairs တွေကို ဖွင့်ပြောလိုက်တာပဲ ။ ဒါဟာ စကားတိုးတိုးပြောရမယ့် အကြောင်းပြချက်ပဲ ဖြစ်တယ် ။
သင့်ရဲ့ ring tone ကိုလည်း increasing ring မဖြစ်အောင် off လုပ်ထားပါ ။
သင်ဟာ office ၏ အပြင်ကို ရောက်နေတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ voicemail နဲ့ email ကို adjust လုပ်ခြင်းဖြင့် တခြားသူများက အကြောင်းကြားလို့ရအောင် လုပ်ပါ ။ သင် ဘယ်အချိန်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာ သိရှိစေရန် indicate လုပ်ရပါမယ် ။ သင်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်း အဲဒိ ountdated message တွေကို edit ပြန်လုပ်ဖို့ သတိရပါ ။ နွေရာသီကိုရောက်နေတာတောင် ” I’ll be away for Christmas season ” ဆိုတဲ့ voicemail message တွေက တကယ်ကို မိုက်မဲပါတယ် ။
သူများတွေ စားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေချိန်မှာ သင်ဟာ တခြားသူများရဲ့ အခန်းဘေးမှာ ဖုန်းပြောဖို့ မတ်တပ်ရပ်မနေပါနဲ့ ။ ဒါဟာ မစဉ်းစား မစဉ်ချင်တဲ့ အပြုအမူ inconsiderate act ဖြစ်ပြီး သူများကို စိတ်အနှောက်အယှက် distract ဖြစ်စေပါတယ် ။
တခြားသူများက စောင့်နေတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် ချိန်းဆိုမှုများကို အချိန်မှန် ထုတ်ဖော်ပြသပါ ။ အစည်းအဝေးမှာ ဟိုခြစ်ဒီခြစ်လုပ်ခြင်း ၊ သင့်ရဲ့ mobile phone နဲ့ text messages များပို့ခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရပါဘူး ။ ဒါဟာ အစည်းအဝေးလုပ်နေသူများကို မရိုသေရာ ရောက်ပါတယ် ။ သင့်ရဲ့ mobile ကို silent mode လုပ်ထားပါ ။ ဒါမှမဟုတ် သင်ဖြေကြားရမယ်ဆိုရင် အခန်းမှ ထွက်သွားပါ ။
ဘာမှ လုပ်စရာမရှိခြင်းသည် ရုံးမှာ အတင်းအဖျင်း gossip များကို ဖိတ်ခေါ်နေသလို ဖြစ်သည် ။ new projects များကို စတင် အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ အားလပ်ချိန် free time များကို အသုံးပြုပါ ။ ဒါမှမဟုတ် extra responsibilities များကို သင်လုပ်ကိုင်နိုင်စေဖို့ သင့်ရဲ့ supervisor နဲ့ စကားပြောဆိုကြည့်ပါ ။
5.Enteraname for the shortcut. You can call it “Lock Workstation” or choose any name you like.
အင်တာနက်စီသို့ ခြေဦးလှည့်လာကြတာ မဆန်းပါဘူး ။ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သုံးစွဲခ ဘီလ် ( bill ) ကို ဘယ်လိုပေးချေရမလဲ ဆိုတာနဲ့
Website မှာ ဘာစာတွေ ရေးကြသလဲ ကိုယ့်ရဲ့ web site မှာ ဘာအကြောင်း အရာတွေကို ရေးသားဖော်ပြမလဲ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုသာ ရေးကြပါ ။ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကို ရေးရမယ်လို့ ပြောဖို့ခက်လှပါတယ် ။ သင်သာလျှင် သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး ၊ သင်အရေးချင်ဆုံးကို သိသူမို့လို့ပါ ။
သင့်မှာ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်ရှိလား ? အင်…မရှိဘူးဆိုရင် အခု online မှာ ရေးသားနိုင်ပါပြီ ။ ဟုတ်တယ်လေ အွန်လိုင်မှာဆိုတော့ လူတွေ အကုန်လုံး ဖတ်လို့ရတာပေါ့ ။ အွန်လိုင်း ဒိုင်ယာရီဟာ အလွန့်ကို လူကြိုက်များပါတယ် ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို ပြောကြပါ ။
ကိုယ်ရေးကိယ်တာဆိုတာ ဒါပါပဲ ။ သင်ဟာ personal Web page တစ်ခုကို ရေးချင်တယ်ဆိုရင် ဘာအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ရေးချင်သလို ရေးသားနိုင်ပါတယ် ။ ဒါဟာ သင့် website ပဲလေ ။ သင့်ရဲ့ website နဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ။
The effect of kisses
လူတွေအားလုံး စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တဲ့ ချစ်သူတို့ရဲ့ အနမ်းတွေ အကြောင်းပြောချင်ပါတယ် ။ ချစ်သူတွေပြောတော့ အကြင်နာအနမ်း ၊ ကိုရီးယားလိုပြောတာက ချော့ခီးဆူးလ် ၊ အီးလိုပြောမယ်ဆိုရင် first kiss ပေါ့ဗျာ ။
ပထမဆုံးအနမ်း ရည်းစားဦးအနမ်း ဘယ်သူကပဲ နမ်းနမ်း ဘယ်သူ့ကို နမ်းနမ်း ၊ အနမ်းတွေဟာ ချိုမြိန်တယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်သိသလောက် ပြောရရင် မြန်မာတွေဟာ အနမ်း အကြောင်း ကောင်းကောင်း မသိဘူး ။
ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ဘယ်လို ကျွမ်းကျင်စွာ နမ်းရမလဲဆိုတာ မသိကြပါဘူး ။ အဖြူကောင်တွေ ပြင်သစ်ကောင်တွေကတော့ ဒီနေရာမှာ စာတင်လောက်အောင် ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ် ။
ကျွန်တော် how to kiss ဆိုတဲ့ youtube video တွေ ကြည့်ဖူးပါတယ် ။ အီးလို နမ်းမလား ပြင်သစ်လိုနမ်းမလား ဂျပန်လိုနမ်းမလား ဟုတ်ကဲ့ နမ်းနည်း အမျိုးမျိုးရှိတာတော့ အမှန်ပဲ ။
နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ နမ်းမှာလား ၊ လျှာဖျားလေးနဲ့ နမ်းမှာလား ။ အင် … ဒီစာကို ရေးရင်းနဲ့ ကျွန်တော် တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြေးနမ်းလိုက်ချင်တယ် ဗျာ ။ ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ ကျွန်တော့်မှာ နမ်းရမယ့် ကောင်မလေး
မရှိဘူးဆိုတာ သိကြလားမသိဘူး ။ ကြော်ငြာဝင်တာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ အမှန်တွေ ပြောပြတာပါ ။
တစ်ခါတစ်လေ ရည်းစားထားချင်ပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ယောက်ယောက်ကို ရူးရူးမူးမူး ချစ်ပြစ်လိုက်ချင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်က သူချစ်ကို ရှာပြီး ကိုယ်ချစ်ကို မရှာတဲ့ လူစားမျိုးပါ ။ ဒါကြောင့် ချစ်သူမရှိတဲ့ အချိန်တွေမှာ အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် မမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ the effect of kissing ဆိုတဲ့ အီးလိုရေးထားတဲ့ စာလေးကို website တစ်ခုမှာ ဖတ်မိတယ် ။ ပြီးတော့ ကြိုက်သွားတယ် ဆိုပါတော့ အဲဒါ အခု ပြန်ပြောပြမလို့ ။
၁ ။ အနမ်းဟာ သွေးလည်ပတ်မှု အားကောင်းစေပါတယ် ။ နမ်းနေကြတဲ့ အချိန်မှာ နှလုံးခုန်နှုန်းဟာ တစ်မိနစ်ကို ၁၁၀ အထိလောက် တက်လာတတ်ပါတယ် ။ အဲဒါကြောင့် သူတို့က အနမ်းကို သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုလို့ ယူဆကြပါတယ် ။
၂ ။ နမ်းပြီးသွားတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အစာအိမ်ဟာ အလုပ်ပိုလုပ်ရပါတယ် ။ ပုံမှန် အသက်ရူရှိုက်ချိန်ဟာ တစ်မိနစ်ကို ၂၀ ကနေ ၆၀ လောက်အထိ ဖြစ်လာပါတယ် ။ ဒီလို အသက်ရူပုံမျိုးဟာ အဆုပ် နဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ
မဖြစ်အောင် ကာကွယ် ပေးပါတယ်တဲ့ ဗျာ ။
၃ ။ Dentists လို့ခေါ်တဲ့ သွားဆရာဝန်တွေကလဲ အနမ်းဟာ သွားတွေ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ် ။ သွားဆေးခန်းကို သွားပြီး အသေးစိပ် မေးမြန်း ကြည့်ပါ ။
၄ ။ သုံးမိနစ်ထက်ပိုကဲတဲ့ အနမ်းတွေဟာ စိုးရိမ်ပူပန်မှု စိတ်ပင်ပန်းမှု stress တွေကို ပြေပျောက်စေပါတယ် ။ ဒါဆိုရင်တော့ ရည်းစား အမြန်ထားမှ ဖြစ်တော့မယ် ။
၅ ။ ကိုယ်ချစ်ခင်ရသူနဲ့ မနက်တိုင်း အနမ်းတွေ ဖလှယ်ကြခြင်းဟာ မနမ်းကြသူတွေထက် အသက် ငါးနှစ် ပိုရှည်စေပါတယ် ။
၆ ။ အနမ်း ဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ၊ တန်ဖိုးထားမှု နဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို ပျော်ရွှင်စေမှု တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် ။
ရ ။ သုတေသနပညာရှင်ပြောကြတာက တစ်နေ့မှာ သုံးကြိမ်လောက် စိတ်အားတက်ကြွစွာ နမ်း်ခြင်းဟာ (အနည်းဆုံး စက္ကန့် ၂၀ လောက်ရှိရမယ်) ၀ိတ်ကျစေပါတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အနမ်းဟာ calories တွေကို လောင်းကျွမ်း စေပါတယ် ။
၈ ။ အနမ်းပေးဖို့အတွက် မျက်နှာမှာရှိတဲ့ muscles ပေါင်း ၃၀ အလုပ်လုပ်ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မျက်နှာ အရည်ပျားလျော့တွဲကျခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး facial muscles တွေကို တင်းရင်း စေပါတယ် ။
ထို့အပြင် အနမ်းဟာ အသားအရည်ကို ချောမွေ့စေပါတယ် ။ ဒါဆိုရင် facial mask , day cream & night cream တွေ ၀ယ်သုံးစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့နော် ။ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေတာပေါ့ ။ ဂွတ် ကောင်း ဗျာ့ ။
၉ ။ အနမ်းဟာ နှလုံး အတွက် ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိပါသလား ။ နမ်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ရင်တွေ တအားခုန်နေတာ နှလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သွေးပြန်ကြော သွေးလွတ်ကြောတွေ ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နေလို့ပေါ့ ။
သိပ္ပံနည်းကျကျ ပြောရမယ် ဆိုရင် မကြာခဏ နမ်းခြင်းဟာ blood pressure နဲ့ cholesterol တွေကို ကျစေပါတယ် ။
၁၀ ။ ဒါကြောင့် မကြာ မကြာ နမ်းကြပါ များများ နမ်း ပါ ။ အနမ်း ဟာ the key to happiness ဖြစ်တယ် ၊ အနမ်းဟာafeeling of pease ကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ် ။
တကယ်လို့ မင်းမယုံဘူးဆိုရင် အနမ်းဘုရင်မ လွမ်းထားထား ကို သွားမေးကြည့်ပါ ။
တကယ်လို့ မင်းသိချင်သေးတယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့ အင်းယားကန် မှာ ချစ်နေကြတဲ့ ချစ်သူတွေကို သွားမေးကြည့်ပါ ။
အနမ်းဟာ ကောင်းလား မကောင်းဘူးလား မေးရင် “ကောင်းပါတယ်” ဆိုတဲ့ အဖြေကိုသာ မင်းကြားရလိမ့်မယ် ။ကမ္ဘာမှာ ချစ်သူများနေ့ပဲ ရှိတယ် ။ အနမ်းနေ့ဆိုတာ မရှိသေးဘူး ။ အနမ်းနေ့ဆိုတာ ရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့ ။ ဒါဟာ ကွက်လပ်တစ်ခု ဖြစ်နေတယ် ။ အနမ်းတွေ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုတယ် ။
အနမ်းနေ့မှာ ရုံးတွေအားလုံး ပိတ်ရမယ် ။ ချစ်သူအားလုံး လူကြီးလူငယ်အားလုံး ကလေးတွေအားလုံး နမ်းကြရမယ် ။ ဒီအကြံပေးချက်ကို ကုလသမဂ္ဂ လူကြီးတွေ သိဖို့လိုအပ်တယ် ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ အနမ်းက စတယ်ဆိုတာ ဒီလူတွေ မသိကြဘူး ။
ရန်ကုန်မြို့မှာ ဘာသင်တန်း ညာသင်တန်း နဲ့ အလကား သင်တန်းတွေတာ ပေါများပါတယ် ။ အနမ်းကျောင်းရယ်လို့ မရှိဘူး ။ Diploman in Kissing ဆိုတဲ့ Subject ကို ပြဠာန်း မထားဘူး ။
မြန်မာလူမျိုးတွေက ရှက်တတ်တယ် ။ အနမ်းအကြောင်းပြောရင် ရယ်မယ် ။ အဲဒါ ဂုဏ်ယူစရာလို့ ထင်နေရင်မှားမယ် ။ မြန်မာ လူမျိုးတွေ မဖွံဖြိုးမတိုးတက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုဟာ မနမ်းကြလို့ ဖြစ်တယ် ။
အနမ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းကျောင်းတွေ ရှိရမယ် ။ အနမ်းအကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေရှိရမယ် ။ အချစ်ကို ခိုင်မြဲစေသော အရာ တစ်ခုဟာ အနမ်းဖြစ်တယ် ဆိုတာ လူတွေ သဘောမပေါက်သေးဘူး ။
မြန်မာတွေဟာ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို နှုတ်ခမ်းက ပြောတယ် ၊ စာနဲ့ရေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူကို နမ်းဖို့ကြတော့ တွန့်ဆုတ်နေကြတယ် ။ နေ့ရွေ့ ညရွေ့ လုပ်နေတယ် ။ အဲလိုနဲ့ ၃ လ ၆ လ လောက်နဲ့ ပျက်သွားကြတဲ့ အတွဲတွေ မနည်းဘူး ။
အာဖဂန်နစ္စတန် အစည်းအဝေး ၊ သဘာဝဘေးအန္တရယ်ကာကွယ်ရေး အစည်းအဝေး စတဲ့ အ၇ည်မရ အဖတ်မရတဲ့ အကြောင်းတွေကို လူတွေက တော်တော် စိတ်ဝင်စားပုံရတယ် ။ ဒီကမ္ဘာမှာ သဘာဝဘေးတွေကို
မားမားမတ်မတ် ခုခံနိုင်တဲ့ နိုင်ငံ အကြောင်း ကျွန်တော်မကြားဖူးဘူး ။ ရေးကြီးလို့ မုန်တိုင်းလာလို့ ငလျင်လှုပ်လို့ ဆိုပြီး ပျက်စီးသွားတဲ့ သတင်းတွေပဲ အသက် ၃၀ အထိ ကြားနေတုန်းပဲ ။ အခုထိ အဲဒိ ဆွေနွေးပွဲတွေက
မပြီးသေးဘူးလား ။ ဘယ်တော့ပြီးမှာလဲ ။ မင်းတို့သေရင်ကော ပြီးမှာလား ။ ကျွန်တော်ကတော့ နေပူပူ မိုးရွာရွာ ကမ္ဘာကြီးပျက်ပျက် ဂရုမစိုက်ပါဘူး ။ ကာကွယ်ဖို့လည်း မကြိုးစားပါဘူး ။ လူတွေ လုပ်နိုင်တဲ့အရာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆတယ် ။
အသက်ရှင်ချိန် ခဏ နဲ့ ဒီစိတ်လေး တစ်ခုကိုပဲ ကျွန်တော် တန်ဖိုးထားတယ် ။
ဘုရားက ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြလို့ ဆုံးမတယ် ။ လူတွေက နားမထောင်ဘူး ။ အမုန်းဆုံးလက်နက်နဲ့ အမုန်းစစ်တိုက်ကြမယ်တဲ့ ။ ငါဟာ ဒီကမ္ဘာကြီး အတွက် ဖြေဆေးတစ်ခုပေးတယ် ။ မင်းတို့ သေနက်တွေ ဘေးချပြီး
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဖမ်နမ်းကြတော့ ။ ဘာအစည်းဝေး ညာအစည်းဝေး လုပ်မနေပါနဲ့ ၊ တွေ့တဲ့လူကို ဖက်သာနမ်းပစ် ။ မင်းတို့ ချစ်တဲ့သူကို ဘေးမှာထားပြီး ကြင်ကြင်နာနာ နမ်းနေကြပါ ကမ္ဘာကြီး အေးချမ်းသွားပါလိမ့်မယ် ။
ဒီအနမ်းအကြောင်းကို လူတွေ ကြယ်ကြယ်ပြန့်ပြန့် သိဖို့လိုအပ်တယ် ။ အနမ်းမှာ ဆိုးကျိုးရယ်လို့ ဘာမှမရှိဘူး ။ အနမ်းဟာ လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ၊ နှလုံး ၊ အဆုတ် ၊ စိတ်ဖိစီးမှု ၊ သွေးတိုး ၊ အသက်ရှည်ခြင်း ၊ နုပျိုလှပခြင်း
ပျော်ရွှင်ခြင်း အားလုံးနဲ့ ပတ်သက်နေတယ် ။ အနမ်းဟာ အထူးပြုလေ့လာရမယ့် ဘာသာတစ်ခုဖြစ်တယ် ။ အနမ်းအကြောင်းလူတွေ သိရှိအောင် ဒီစာကို forward လုပ်ပေးပါ ။
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ နှလုံးမကောင်းတဲ့သူ ၊ သွေးတိုးတက်တဲ့သူ ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့သူ တွေရှိကြပါတယ် ။ သူတို့ကို ကျွန်တော် ဒီစာ ဖတ်စေချင်ပါတယ် ။ သူငယ်ချင်းတွေလဲ နမ်းသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆတယ် ။
ပိုခင်တဲ့သူကို ပိုနမ်းပေါ့လေ ။ အနမ်းအကြောင်းသိချင်တဲ့ ချစ်သူမရှိတဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ကျွန်တော် volunteer အနေနဲ့ အခမဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပေးရင် ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားနေပါတယ် ။
ချောချောလှလှ ကောင်မလေးတွေကို ကျွန်တော် အရမ်း နမ်းချင်ပါတယ် အ .. ဟီး … ။